नदीमा पानीकाे सट्टा सुन बगिरहेको छ, के छ त यसकाे रहस्य! | Suvadin !
नदीमा पानीकाे सट्टा सुन बगिरहेको छ, के छ त यसकाे रहस्य!
भारतमा एक नदी यस्तो पनि छ, जहाँ पानिकाे सट्टा सुन बगिरहेको छ। यो नदी आदिवासी इलाकाबाट बग्ने गर्छ। उक्त स्थानमा स्वर्णरेखा नाम गरको नदी बग्छ। मानिसहरुको दावी छ कि उक्त नदीको उत्पत्ति स्थानमा सुनकाे भण्डार छ।
Nov 28, 2017 19:01
सुन चाल्दै सर्वसाधारण।
काठमाडाैं, मंसिर १२ – भारतमा एक नदी यस्तो पनि छ, जहाँ पानिकाे सट्टा सुन बगिरहेको छ। यो नदी आदिवासी इलाकाबाट बग्ने गर्छ। उक्त स्थानमा स्वर्णरेखा नाम गरको नदी बग्छ।
मानिसहरुको दावी छ कि उक्त नदीको उत्पत्ति स्थानमा सुनकाे भण्डार छ। आदिबासी दिनरात नदीमा बग्ने सुनलाई जम्म गरेर कम मुल्यमा व्यपारीलाई बेच्दै आएका छन्।
यहाँ बस्ने मानिसलाई सुनको वास्तविक मूल्य थाहा छैन। यसकारण केही स्थानीय व्यापारीले उक्त सुनलाई अत्यन्त न्यून रकममा स्थानीयसँग किनेर बजारमा कयौँ गुना महंगोमा बेच्ने गरेको जनाइएको छ।
यसबाट उनीहरुको जीवनको गुजारा चलिरहेको छ। हैरान बनाउने कुरा त के छ भने उक्त नदी अन्य नदीमा नमिसिर्इ सिधैं बंगालको खाडीमा पुग्ने गरेको छ।